Shungite waa madow, shucuur leh, oo aan macdanta lahayn "myraloid"
Micnaha dhagaxa Shungite iyo sifooyinka macaan ee metaphysical.
Shungite waa macdanta madow, lustust, non-crystalline mineraloid oo ka kooban in ka badan boqolkiiba 98 boqolkiiba kaarboon. Waxaa marki ugu horaysay lagu sharaxay dhigaal udhow tuulada Shunga, ee Karelia, Russia, meesha ay ka hesho magaceeda. Dhagaxa waxaa lagu soo warramey inuu kujiro xaddi yar oo ah fullerenes (0.0001 <0.001%).
Micnaha dhagaxa Shungite
Ereyga "shungite" waxaa asal ahaan loo adeegsaday 1879 in lagu sharaxo miinoolaydh leh in kabadan 98 boqolkiiba kaarboon. Dhawaan dhowaan ereyga ayaa sidoo kale loo isticmaalay in lagu sharaxo dhagaxyada dhalista shungite, taasoo keentay jahwareer xoogaa ah. Dhagaxa THE sidoo kale waxaa si gaar ah loogu sifeeyay kaarboonka ay ka kooban yihiin, iyadoo shungite-1 uu leeyahay kaarboon ka kooban inta u dhexeysa boqolkiiba 98-100 iyo shungite-2, -3, -4 iyo -5 oo leh waxyaabaha ku jira aagagga 35-80 boqolkiiba , Boqolkiiba 20-35, 10-20 boqolkiiba iyo in ka yar 10 boqolkiiba, siday u kala horreeyaan. Kala soocid dheeri ah, Dhagaxa waxaa loo qaybiyaa dhalaalaya, nus-dhalaalaya, nus-caajis iyo caajis iyadoo lagu saleynayo damacooda.
Quruuradu waxay leedahay laba nooc oo muhiim ah oo dhacdooyin ah, laguna faafiyay dhagaxa martida loo yahay iyo sida muuqata wax abaabulay. Shungite soo haajiray, oo ah dhagxaan dhalaalaya, ayaa loo tarjumay inuu matalayo hydrocarbons-ka soo haajiray waxaana loo arkaa inay yihiin lakab, lakab ama muraayadaha indhaha oo u dhow inay la jaan qaadaan lakabka dhagaxa martida loo yahay, ama xididka, kaas oo loo arko inuu yahay xididada is-goynta sidoo kale waxay u dhici kartaa inay ahaato xirmooyin ka mid ah dhagxaanta yaryar ee yaryar.
Gemstone waa inuu taariikhda inta badan laga helaa Ruushka. Kaydka ugu weyn wuxuu ku yaal harada Lake Onega ee Karelia, Zazhoginskoye, oo u dhow Shunga, iyadoo dhacdo kale ay ka dhacday Vozhmozero. Laba dhacdo oo kale oo aad uga yar ayaa laga soo sheegay Ruushka, mid Kamchatka ah oo ku taal dhagaxyada fulkaanaha iyo midda kale oo ay sameeyeen gubitaankii ka dhacay dhuxusha laga qodo heerkulka sare ee Chelyabinsk. Dhacdooyinka kale waxaa lagu sharaxay Austria, India, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Kazakhstan.
Dhagaxa waxaa loo arkaa inuu tusaale u yahay sameysashada batroolka abiogenic, laakiin asal ahaan bayooloji ahaan hadda waa la xaqiijiyay. Dhagxaanta aan haajiray waxaa si toos ah si xeeladeysan looga heystaa kaydadka lagu sameeyay qashin-qubka kaarboonate-biyood aan durugsaneyn ee deegaanka u-goosashada badda. Isku xigxiga dhalista shungite waxaa loo maleynayaa in la dhigey inta lagu gudajirey ficil firfircoon, oo la jaan qaada dhagxaanta volkanic ee alkaline ee laga dhex helo taxanaha. Dareeraha dabiiciga ah ee hodanka ku ah waxaa suuragal ah in lagu xareeyay goob gogol xaadh ah. Isku soo uruurinta kaarboonka waxay muujineysaa heerarka wax soo saar bayoolajiyeed oo sareeya, laga yaabee inay ugu wacan tahay heerarka sare ee nafaqooyinka laga heli karo walxaha isku dhafan.
Hantida shungite-sita ee qaloocsan ee haysa qaabdhismeedka daadka ayaa loo tarjumay dhagaxyada ilaha saliida metamorphosed. Qaar ka mid ah qaab-dhismeedka qaabeeya likaha 'diapiric' ayaa la aqoonsaday, kuwaas oo loo fasiray inay yihiin volcanoes dhoobo ah. Lakabyada iyo noocyada xididka, iyo buuxinta vesicles-ka iyo sameynta jaantuska loo yaqaan 'breccias', waxaa loo fasiray batrool guurey, oo hada qaab metamorphosed bitumen ah.
Debaajiga dhagaxu wuxuu ka kooban yahay qiyaas ahaan wadarta keydka kaarboon oo ka badan 250 gigatonnes. Waxaa laga helaa isku xigxiga dhagxaanta Palaeoproterozoic metasedimentary iyo metavolcanic dhagaxyada lagu keydiyo isku mid. Tixraaca waxaa ku taariikhaysan gabbro, kaas oo ku siinaya taariikh 1980 ± 27 Ma, iyo dolomites-ka salka ku haya, kaas oo ku siiya da'da 2090 ± 70 Ma. Waxaa jira sagaal lakab oo shungite-sita gudaha Zaonezhskaya Formation, laga bilaabo bartamaha taxanaha la ilaaliyay. Kuwaas kuwa ugu dhumuc weyn waxaa ka mid ah lakabka lixaad, oo sidoo kale loo yaqaan "Waxsoosaarka Waxsoosaarka", iyadoo ay ugu wacan tahay uruurinta keydka dhagaxa Afar kayd oo waaweyn ayaa laga yaqaan aagga, Shungskoe, Maksovo, Zazhogino iyo Nigozero. Debaajiga Shungskoe waa midka ugu badan ee la barto waxaana badanaa la qodaa.
Dhagaxa waxaa loo adeegsaday daaweyn dadweyne tan iyo horaantii qarnigii 18aad. Peter the Great wuxuu aasaasay dalxiiskii ugu horreeyay ee Ruushku ku yeesho Karelia si uu uga faa'iideysto sifooyinka biyaha lagu sifeeyo ee jawharad, oo isagu laftiisu soo maray. Wuxuu sidoo kale kiciyay adeegsigeeda bixinta biyo saafi ah oo loogu talagalay ciidanka Ruushka. Waxyaabaha ka hortagga bakteeriyada ee loo yaqaan 'crystal' waxaa lagu xaqiijiyay baaritaan casri ah.
Waxaa loo isticmaali jiray tan iyo bartamihii qarnigii 18aad midab ahaan rinjiga, waxaana hadda lagu iibiyaa magacyada "kaarboonka madow" ama "shungite natural black".
Toddobaatanaadkii, waxaa looga faa'iideystay soo saarista maaddada insulin-ta, oo loo yaqaan 'shungisite'. Shungisite waxaa lagu diyaariyaa kuleylinta dhagaxyada leh uruurin hoose ilaa 1970 - 1090 ° C waxaana loo isticmaalaa sida buuxiyaha cufnaanta hoose.
Micnaha dhagaxa Shungite iyo faa'iidooyinka daaweynta bogsiinta metaphysical
Dhagaxan waxaa la rumeeysan yahay inay leeyihiin sifooyin kor u qaadi kara caafimaadka maskaxdaada, jidhkaaga, iyo naftaada siyaabo kala duwan.
Micnaha dhagaxa Shungite iyo guryaha bogsiinta metaphysical crystal waa dhagax dhulgariir aad u fiican. Gariirkeeda sare wuxuu kaa caawinayaa inaad hoos u dhigto astaamaha jidhkaaga ruux ahaaneed diyaaradda jireed si aad si fiican ugu dhexgeli karto xikmadda cosmic iyo duruusta karamka. dhagaxu waa nadiifiye awood badan wuxuuna nolosha ka joojiyaa waxyaabo laga yaabo inay tamartaada ka baxaan.
Tan iyo wakhtiyadii hore, jawharad ayaa loo isticmaali jiray in lagu nadiifiyo biyaha. Tan waxaa ugu wacan waxqabadkiisa la sheegayo ee ka dhanka ah bakteeriyada iyo fayrasyada.
Daraasad la sameeyay 2018 ayaa lagu sheegay in sunta daran ay sifayn karto biyaha iyadoo laga saarayo waxyaabaha wasakhaysan iyo walxaha dabiiciga sida sunta cayayaanka. Daraasad 2017 ah ayaa sidoo kale lagu ogaaday in kaarboon ka timaada shungite ay biyaha ka saari karto xeryahooda shucaaca ku shaqeeya.
Haddii aad la halgameyso culeys, walaac, ama dareemid culeys, iskuday inaad xirato qayb ka mid ah waxyaabaha dahabka lagu xiro. Waqti kasta oo aad dareento culeys, u fiirso meesha dhagaxu kula xiriiro jirkaaga jirka, indhahaaga xir, oo diiradda saar neeftaada. Ku neefso tirinta afarta, ku hay tirinta afar, ka dibna u neefso tirinta afar. Neefsashadaan qoto dheer, qaafiyadda leh ayaa kugu soo celin doonta xaruntaada waxayna kaa caawin doontaa abuuritaanka xasilloonida maskaxdaada.
Shungite ma leeyahay waxyaabo bogsiinaya?
Micnaha dhagaxa Shungite iyo sifooyinka macaan ee metaphysical bogsiinta ee nadiifinta jirka iyo sunta, sifooyinka bogsiinta waxay si qoto dheer u galaan goobaha shucuurta iyo ruuxiga ah, taasoo u oggolaaneysa qof kasta oo la shaqeeya shungite inuu ka nadiifiyo aaggooda tamarta tamarta waxyeelada leh ama aan la rabin.
Xagee baan dhigaa shhungite gurigayga?
Dhagaxa dhig sariirtaada dhinaceeda ama barkintaada hoosteeda. Sidoo kale, waxaad ku dhejin kartaa haramka agtaada kormeerahaaga ama microwave-kaaga. Dheji saxanka vrystal-ka daboolka dambe ee taleefankaaga gacanta. Waxa kale oo aad xidhan kartaa jawharad qaab ah shaati iyo dambas.
Ammaan ma tahay in la xidho shinnida?
Xirashada shungite kaliya kama dhigeyso bogsiinta chakra mid aad u awood badan, laakiin sidoo kale waxay dhexdhexaad ka dhigeysaa tamarta laga sii daayo chakra xiran ama xad dhaaf ah. Dhexdhexaadinta tamarta ayaa kuu oggolaan doonta inaad si ammaan ah ugu tababbarto bogsashada 'chakra' una soo celiso dheelitirka xididka.
Sideed ku ogaan kartaa in sunnigu run yahay?
Midabka madow ee degdegga ahi waa calaamadda ugu horreysa ee lagu garto dhagax dhab ah. Badanaa waxay leedahay faleebooyin midabyo bunni ah, cawl ama dahab ah. Kuwani waa raadadka macdano kale sida pyrite, oo laga helo isla lakabka.
Sidee u nadiifisaa kristantariyadaada?
Ku dhex maydh kareemkaaga qubays biyo ah habeenkii, ama ku hay biyo qabow oo socda dhowr daqiiqo. Biyaha cusbada ayaa sidoo kale nadiifin doona kristantarrada. Isticmaal biyaha badda ama isku dar ka sameysan 1-2 qaado oo cusbo ah oo gebi ahaanba lagu kala diray 8 ounces oo biyo ah. Ku nadiifi kareemkaaga biyo saafi ah markaad dhammayso.
Waxaan u sameysanay caado ka sameysan dahabka loo yaqaan 'shungite crystal stone crystal' ee iibka ah siddo kaqeybgal, silsilado, hilqado dhejis ah, jijimooyin, suumano… nala soo xiriir xigasho.